Isikhungo Sokuhamba Sabadala Esiphezulu se-Alpine Ski Boot China Manufacturer
Incazelo:Isikhwama seSki Yezokuhamba,Ukuhamba KweSki Bag,Amabhegi eSki Bag
 HomeImikhiqizoIzesekeli zeSkiIsikhwama seSkiIsikhungo Sokuhamba Sabadala Esiphezulu se-Alpine Ski Boot
I-Model No.: HXW-S19
Isikhwama esisezingeni eliphakeme seSki Boot: Beka amabhuzu akho e-ski, ijakhethi, isigqoko kanye neminye imishini yokushushuluza bese uqala ukuhamba kwakho nge-ski.
Izikhwama Ze-Ski Ezinezintambo Ezicasulayo: Lapho imithambeka iba inkungu noma i-twilight, imicu ekhanyayo emaphethelweni ikwenza ubonwe ngabasiki bengqephu.
Isikhwama Sokugcina Sokuguquguquka: Lesi sikhwama esiyinhloko singasetshenziselwa amabhuzu e-ski noma izigqoko zokuvikela, kanti amaphakethe aseceleni nangaphambili ayilungele ukugcina amagobolondo e-ski namagilavu ​​e-ski
Isikhwama Sama-Boot esikhanyayo seDurable: Yenziwe nge-polyester ebangeni eliphakeme lamanzi, yaqiniswa ngokugxisha okumbili, phansi kogqinsi, nokugqokwa kwehlombe eligxiliwe ukuthwala kalula.
Isikhwama Samagiya Angaphandle Sangaphandle: Lesi sikhwama segiya esinamandla sihlala kahle kwabesifazane nabesilisa, silungele ukushushuluza. Ikhompiyutha ephezulu yenhlangano elula, efanelekile ukugcina amabhuzu, izigqoko zokuvikela izigqoko namagiya okushushuluza.
Indwangu: I-polsyster engamanzi engama-600
I-logo: ukuphrinta kwesilika
Ukusetshenziswa: thwala amagiya ebusika
Isipiliyoni Esicebile: Sineminyaka eminingi yesipiliyoni ekukhiqizeni nasekuthengiseni imikhiqizo yokushushuluza, kufaka phakathi imichilo ye-ski, imichilo yezwekazi, isikebhe ski, umucu othwala i-ski. Sizokunikeza ngokubonisana nezinsiza ezinhle kakhulu.
Ikhwalithi Ephakeme: Ngezinto ezisetshenziswayo ezisezingeni eliphakeme kakhulu nokuthunga okuqinile, intambo yethu yokubamba i-ski iwukuqinisekisa ukusetshenziswa kwesikhathi eside
Ukuvikelwa kwemvelo: lokhu okusetshenziswayo kuyimvelo futhi akunabuthi, kudluliswa yi-ROHS, SGS, nesitifiketi se-BSCI
Isikhwama Sokuphrinta Kwama-Carry Ski Ezemidlalo Ephansi Xhumana Nanje
Isikhwama Sama-Boot Esikhwama SaseSki Xhumana Nanje
Isikhwama esikhwameni sePole Ski Pole Xhumana Nanje
I-600D Nylon Snowboard Isikhwama Xhumana Nanje
Isikhwama Sebhodi Lezikebhe Esiqhekezwe Ngebhodwe Lendwangu Esingenamanzi Xhumana Nanje
I-Custom Outdoor Sport Ski Bag Waterproof Xhumana Nanje
Isikhungo Sokuhamba Sabadala Esiphezulu se-Alpine Ski Boot Xhumana Nanje
Isikhwama seSki Yezokuhamba Ukuhamba KweSki Bag Amabhegi eSki Bag Isikhwama seSki neqhwa Isikhwama Seqhwa Sokuhamba Isikhwama seSki ne-Boot Isikhwama Sokuhamba KweSki Isikhwama Sokuhamba Ngeqhwa